Umaki: spotify | Martech Zone
I-Transistor: Sesha futhi Usabalalise Ibhizinisi Lakho Iphodikhasti Ngaleli Podcasting Platform
NgoMsombuluko, Novemba 22, 2021 NgoMsombuluko, Novemba 22, 2021 Douglas Karr
Elinye lamakhasimende ami selivele lenza umsebenzi oncomekayo ekusebenziseni amavidiyo kusayithi lawo kanye naku-YouTube. Ngaleyo mpumelelo, babheke ukwenza izingxoxo ezinde, ezijulile nezivakashi, amakhasimende, nangaphakathi ukusiza ukuchaza izinzuzo zemikhiqizo yabo. I-Podcasting iyisilwane esihluke kakhulu uma kuziwa ekuthuthukiseni isu lakho… futhi ukusingathwa kuhlukile futhi. Njengoba ngithuthukisa isu labo, ngihlinzeka ngesifingqo salokhu: Umsindo - ukuthuthukiswa
NgoLwesibili, Novemba 9, 2021 NgoMsombuluko, Novemba 22, 2021 UThomas Brodbeck
I-Soundtrap: Dala i-Podcast Yakho Eqhutshwa Yisihambeli ku-Cloud
Uma ngabe wake wafuna ukudala i-podcast futhi uletha izivakashi, uyazi ukuthi kungaba nzima kanjani. Njengamanje ngisebenzisa i-Zoom ukwenza lokhu ngoba banikela ngenketho yamathrekhi amaningi lapho ngirekhoda… ngiqinisekisa ukuthi ngikwazi ukuhlela ithrekhi yomuntu ngamunye ngokuzimela. Kusadinga ukuthi ngingenise amathrekhi alalelwayo ngiwaxube ku-Garageband, noma kunjalo. Namuhla bengikhuluma nozakwethu uPaul Chaney futhi ungabele ithuluzi elisha,